Matrox Monarch Edge manampy ny mpampita ny fizarana fizarana horonantsary tsara kokoa NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Matrox Monarch Edge dia manampy amin'ny Broadcasters hizara atiny horonantsary mivantana amin'ny Live
Matrox Monarch Edge dia manampy amin'ny Broadcasters hizara atiny horonantsary mivantana amin'ny Live
Ny fomba anehoana ny votoatin'ny horonantsary sy ny fanodinana dia zava-dehibe, indrindra rehefa mihamalalaka ny fahombiazana sy ny serasera satria mihamitombo ny fangatahana fitaovana avo lenta. Ny matihanina amin'ny fampielezam-baovao dia mahalala izany, ary miaraka amin'ny teknolojia fampiodinana miakatra haingana be toy ny 4k, tsy misy afa-tsy ny fampanantenany mialoha ny indostrian'ny fahitalavitra ary ny fomba toy ny mpamatsy vokatra video Matrox misy fiantraikany amin'ny fivoarany. Raha ny fanapahana hery amin'ny fampiodinana tsy manam-paharoa sy matanjaka miaraka amin'ny haingam-pandrefesana amin'ny codec H.264, Matrox dia tompon-daka tamin'ny androny tamin'ny maha-mpamatsy vokatra azy mihetsika avo lenta nandritra ny taona 35 lasa. Ny kolontsain'ny Matrox dia nitazona hatrany hampivoatra sy manavao ao anatin'ny sehatry ny teknolojia avo lenta. Hatramin'ny 1976, ny orinasa dia nahomby tamin'ny fahaizany namokatra vokatra momba ny kalitao ho an'ny matihanina lahatsary sy mpamoaka horonantsary, satria mbola nanohy ny fanodinana sy nivoatra hatrany izy io. Tamin'ny voalohandohan'ny volana aprily teo 2019 Kat Show, Nasehon'i Matrox ny fahombiazan'ny fahombiazany amin'ny alàlan'ny fampitana ny encoder farany fakan-tsary farany azy, izay nanome azy ireo ny mendrika NAB 2019 Vokatra amin'ny taona amin'ny famokarana lavitra & loka mendrika indrindra amin'ny loka Winner.
Ity taona 2019 ity Kat Show nanaporofo izany fa fampisehoana mahafinaritra, hoy i Matrox nanambara ny Matrox Monarch EDGE, 4K / Multi-HD tranokala sy encoder famokarana lavitra. Ity encoder ity dia manome fitaovana ny fampielezam-peo matanjaka, ambany, ary mavitrika H.264 encoding, izay amboarina amin'ny fitaovana mavesatra sy ambany ary ambany portable. Ny mahomby amin'ity encoder ity dia manampy ny mpanentana handefa votoaty mivantana sy manery amin'ny alàlan'ny fampiasany ny 4K (HFR) avo lenta, ny 4K 360 VR, ary ny fisafidianana maro-fakantsary. Amin'ny teny tsotra kokoa, ny Monarch EDGE dia manome alalana ireo mpamatsy atiny hanolotra traikefa mpijery 4K tena ambony.
Ny fomba fanatsarana ny famoahana horonantsary ny monarch Edge
Mpandrindra ara-teknika matrox
Ny sisin'ny Monarch dia azo antoka fa nitondra fanavaozana ara-teknolojia be dia be ao anaty tranokala amin'ny Internet ary koa ny fandefasana, ary io no tena naseho tao amin'ny 2019 Kat Show. Ny asan'ny Monarch Edge dia nohazavain'ny tompon'andraikitra amin'ny marketing ara-teknikan'ny orinasa, Dan Maloney. Rehefa misolo tena Matrox ao amin'ny 2019 NAB Show, Nilaza i Maloney fa amin'ny maha encoder azy, ny Monarch Edge dia tsy vitan'ny fampidirana fanatanjahan-tena haingam-pandeha ihany, fa ny fomba fampidirana efatra (iray 12 sgi, 3gsdi telo) dia afaka mamehy ny 4k 60 feno na anaty zorony / tontolo iainana maro samy hafa mitovy amin'ireo renirano nampiantrano azy mivantana ny youtube tontolo. Io dia ahafahan'ny mpijery hijery ny votoatiny amin'ny zoro tsara kokoa avy amin'ireo zoro efatra misy an-daharana ahafahan'ny encoder ahafahan'izy ireo mijery ny votoaty mivantana.
Raha nifanakalo hevitra momba ny lafiny famokarana lavitra dia niresaka bebe kokoa momba ny fampiasan'ny Monarch Edge renirano marobe, indrindra tamin'ny alàlan'ny 4: 2: ny fampielezam-peo 2 10, afaka nanamora ny fahazoan'ny mpampita fahitalavitra amin'ny fahazoana votoaty avo lenta ary hampihenana ny filàna. b-van (famelabelarana van). Raha ny tokony ho izy, raha ny cameraman handeha handeha hamoaka horonantsary mivantana amin'ny hetsika toy ny lalao ara-panatanjahantena, dia afaka mivoaka eo amin'ny toerana izy ireo, mameno ny votoaty nalaina sary, ary mandefa mivantana any amin'ny studio mba hamokarana lavitra mba hanomezana sakafo mivantana. mitovy ny atiny.
Betsaka ny zavatra horesahina momba ny momba ny tontolon'ny fampitana an-tsokosoko sy ny fivontosana 4k izay tsy niasa afa-tsy izany. Ny fandefasana horonantsary dia mandroso fiovana izay tsy dia miharihary satria ny fanavaozana vaovao dia mametraka ny mpampita vaovao amin'ny fampifanarahana ny fomba malalaka kokoa mifototra amin'ny fampidirana ny votoaty kalitao tsaratsara kokoa, ary koa ny fananana goavambe amin'ny fahazoana sy ny fizarana azy mivantana amin'ny renirano mivantana avy amin'ny zoro maro. Ny fampidirana ny Matrox Monarch Edge dia mamela ny fampidirana ny 4K amin'ny vidiny avo lenta (50 na 60 fps), raha ny OVP kosa dia mitazona ireo fanamorana tsy tiana. Noho io karazana haitao ara-teknolojika ahafahan'ny Matrox maka io NAB 2019 Vokatra amin'ny taona amin'ny famokarana lavitra & ny tsara indrindra amin'ny mpandresy amin'ny fampisehoana sy ny InfoComm 2019 no tsara indrindra amin'ny loka Winner Show.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Matrox sy ny Monarch Edge, dia kitiho eto hahafantatra bebe kokoa amin'ny antony maha 4K / Multi-HD Webcasting / Remote Production Encoder dia manome loharano betsaka an'i Matrox amin'ny famoahana atiny amin'ny haino aman-jery.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 4K Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Encoder H.264 codec Lahatsary avo lenta MATROX Monarch Edge Zoro maro Kat Kat 2015 Kat 2016 nab mampiseho 2019 NAB16 nabshow 2019-08-26
Previous: Nanokatra ny toerana sinoa i Cooke Optika mba hampitomboana ny fanohanana iraisam-pirenena
Next: Manome VFX ho an'ny VMA Nominees ny MOD
Voaharesy anarana ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny NAB i Michelle Duke